I-29 yemigangatho ephezulu yeenyawo zeCSS kunye nezihloko kwiphepha lakho Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iintloko kunye neenyawo zii Izinto eziyimfuneko xa usenza iphepha elitsha web okanye ibhlog, okanye ukuba akukho enye into ekufuneka siyivuselele ukuze sihlangabezane nemigangatho yangoku yoyilo lwewebhu. Zizithuba apho undwendwe kwiwebhusayithi yethu zihlala zihlawula ingqalelo enkulu, ke kuya kufuneka sibakhathalele kwaye sibaphathe ngokwaneleyo ukuze bakholise iliso, ngaphandle kokusebenza.
Kungenxa yoko le nto siza kwabelana Iintloko kunye neenyawo ze-29 zeCSS onokuzisebenzisa kwibhlog yakho okanye kwiwebhusayithi, kwaye ke unike inqaku lomgangatho obulifuna. Olu luhlu lwenziwe ngamanqaku apheleleyo kwinqaku lesikrini, kunye nobungakanani obuqhelekileyo, ii-headers ezizinzileyo okanye ezizinzileyo, iinyawo kunye nezinye izihloko zevidiyo ukunika enye indawo yokujonga kwiwebhusayithi yakho.
1 Intloko egobile
2 Umfanekiso wentloko weParallax
3 I-header echanekileyo ye-Angled
4 Intloko ebiyelweyo
5 Intloko ene-SVG oopopayi
6 Intloko ehleliweyo ene-Div
7 Parallax umaleko owahlukileyo
8 Intloko yeposi ehleliweyo
9 Intloko yesikrini esigcweleyo kunye nopopayi
10 Umfanekiso weqhawe elipheleleyo
11 I-Flexbox enamaqhosha
12 Intloko yeHero yeFlexbox
13 Okubhaliweyo okuphezulu kwephepha
14 Ukuphendula ngokuSikrola okuPhendulayo
15 Skrolela iNhloko
16 Isentloko esiPhendulayo esiPhezulu
17 Ukubhalwa kwephepha ngaphakathi / ngaphandle
18 Ukuphela kwentloko
19 Okubhaliweyo okuphezulu kwephepha kufihliwe
20 Unyawo lweparallax
21 Imibhalo engezantsi yesikali somxholo
22 Imithombo yeendaba yeendaba zeNtlalo
23 Imenyu yeenyawo ephathwayo
24 Umbhalo osezantsi ephepheni olula
25 React Header yeVidiyo
26 Umbhalo wevidiyo
27 Isikrini esipheleleyo seVidiyo eneMix-Blend
28 Oopopayi bentloko yeVidiyo
29 Intloko yevidiyo ephendulayo ngegradient
Okubhaliweyo okuphezulu kwephepha kuchongwa ngu isimbo sayo esigobileyo emazantsi eyenza ukuba ibe yintloko ebaluleke kakhulu kwiwebhusayithi okanye kwibhlog. Icocekile i-CSS, ke sele ithatha ixesha ukuyivavanya kwiwebhu yakho ukuba iza kujongeka njani ukuba uyayifaka kwibhlog yakho.
Umfanekiso wentloko weParallax
Ngempembelelo enkulu yomfanekiso weParallax, le ntloko iyazazisa ngo Sebenzisa indawo yangasemva yomfanekiso weCSS. Umfanekiso we-header uza kubekwa phezulu ephepheni ngekhowudi efanelekileyo.
I-header echanekileyo ye-Angled
Le ntloko ilungiswe kakuhle phezulu kwiphepha lewebhu ukuya umahluko naloo mgca wokudibanisa uwela wonke oxwesileyo wokujonga komsebenzisi. Ibonisa indlela izinto zobumbumbulu ze-CSS ezinokusetyenziselwa ngayo ukwenza i-header emileyo enomfanekiso ongasemva.
I-CSS kunye ne-HTML yesi sihloko kumzekelo onikiweyo ubonakalisiwe ecaleni komgca wokudibanisa owela iscreen sonke ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye.
Intloko ene-SVG oopopayi
Isihloko esilula kakhulu, nangona sisebenzisa oopopayi be-SVG ukwahlulahlula esinazo kolu luhlu. Ungafikelela kuluhlu olukhulu lwamaphepha ewebhu ngoopopayi be-SVG ukusuka apha.
Intloko ehleliweyo ene-Div
Ngempembelelo yomfanekiso weParlax, okubhaliweyo okuphezulu okubonakalayo okuchaphazela umphumo omkhulu kufezekiswe ngomfanekiso ongemva ongashukumi ngelixa eminye iskrola njengoko siskrola ngemouse.
Parallax umaleko owahlukileyo
Intloko yeposi ehleliweyo
Intloko yesikrini esigcweleyo kunye nopopayi
Intloko ebonelela ngoopopayi ihamba kamva kwaye ivelisa umphumo wokuphumla kumbukeli.
Umfanekiso weqhawe elipheleleyo
Con umphumo wokusondeza, le okuphezulu okupheleleyo ityhilwa njengenye yemvelaphi enkulu. Ukugqibelela kwiwebhusayithi apho undwendwe luya kuthi lusebenzise ngokuskrola ukuhamba kuyo.
Intloko ebuthatha bonke ububanzi bekhusi ukubonisa iqhosha. Ukugqibelela kwamaphepha okufika nge CSS flexbox.
Intloko yeHero yeFlexbox
Intloko enefuthe iParallax kunye neFlexbox ilula obubalasele ubuhle bokuyilwa kwayo ikakhulu.
Okubhaliweyo okuphezulu kwephepha
Njengoko igama layo libonisa, isihloko esisigxina xa siskrola ngempuku xa sihamba ukubona lonke iphepha lewebhu.
Ukuphendula ngokuSikrola okuPhendulayo
Esinye isihloko esisigxina esisiphumo esihle xa imenyu ifikelela phezulu ephepheni, ngobakwaye ngalo mzuzu ihlala ihleli kwaye sinokuqhubeka nokuskrolela isiza.
Yahlukile kokunye ngu oopopayi abafanelekileyo nababuthathaka njengokuba sihamba. Ekupheleni kwayo, ibhodi yebhodi ephezulu ihlala ihleli phezulu.
Isentloko esiPhendulayo esiPhezulu
Ukubhalwa kwephepha ngaphakathi / ngaphandle
Okubhaliweyo okuphezulu kwephepha okubonakalayo kwisiphumo Ngaphakathi / ngaphandle emva kokukrola kwaye ivelisa imvakalelo yokuphindaphinda.
Okubhaliweyo okuphezulu kwephepha kufihliwe
Intloko eyahlukileyo xa ufihle ngokwe sisebenzisa ukuskrola kunye nopopayi oko kungabonakali kodwa kumgangatho ophezulu.
Imibhalo engezantsi yesikali somxholo
Umgangatho ophezulu kunye neenyawo zasekuqaleni wothusa undwendwe ngendlela entle yokubonisa le ndawo yewebhu.
Imithombo yeendaba yeendaba zeNtlalo
Unyawo olume ngeenyawo olume ngaphandle amaqhosha akhokelela kunxibelelwano lwasentlalweni eyaziwa kakhulu. Oopopayi abakhoyo xa ushiya isikhombisi semouse ngapha konxibelelwano lwasentlalweni.
Imenyu yeenyawo ephathwayo
Ngokunciphisa iwindow yewindows ukujonga le footer, uya kuba nakho fumana amacandelo ama-2-3 ukuba umsebenzisi angafumana kwisixhobo esiphathwayo. Kuboniswa kwi-767px.
Umbhalo osezantsi ephepheni olula
Yenziwe nge-HTML kunye ne-CSS unyawo olulula ngaphandle kwempumelelo enkulu kwaye luyachuma.
React Header yeVidiyo
Intloko ene Ividiyo elula React.js.
Okunye intloko enevidiyo elula kwaye zikumgangatho ophezulu.
Isikrini esipheleleyo seVidiyo eneMix-Blend
Bonisa i ividiyo epheleleyo yesikrini ngombhalo kumaleko usebenzisa imixube yokudibanisa.
Oopopayi bentloko yeVidiyo
Oopopayi babekhona wena ne Adobe Emva Iziphumo ukuhambelana nazo zonke izikhangeli. Ayisebenzi kwiselfowuni.
Intloko yevidiyo ephendulayo ngegradient
El Igradient yeyona nto ibonakalayo kule ntloko yevidiyo ishiyekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » Iintloko ze-29 ze-CSS kunye neenyawo zeblogi yakho okanye iwebhusayithi
Zonke zandiqinisekisa. Enkosi
INintendo ibhengeza ifilimu yoopopayi kaMario